क्यासिनो रोयलमा मजदुरको बिचल्ली, सम्झौता... :: रवीन्द्र शाही :: Setopati
रवीन्द्र शाही काठमाडौं,माघ २३
साढे दुई दशकदेखि सञ्चालित क्यासिनो रोयलमा आजदेखि मजदुरहरु बिचल्लीमा परेका छन्। तुलनात्मकरुपमा राम्रव आम्दानी हुने भनिएपनि त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरु आजदेखि बिचल्लीमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन्।
दरबारमार्गमा रहेको पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिमा रहेको उक्त क्यासिनोमा अपरेटर अवैध भएपनि मजदुर अलमलमा परेका छन्। उनीहरुले आफै क्यासनो सञ्चालन गरिरहेका छन्।
त्यसपछि क्यासिनोले लामो समयसम्म सरकारलाई रोयल्टी नुबुझाएको भन्दै अवैध घोषणा गर्दै सरकारले लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो। त्यतिबेलासम्म राजबहादुर सिंहले क्यासिनोबाट हात झिकिसकेका थिए।
उनले हात झिकेपछि आएका सुरेन्द्रबहादुर सिंहले अदालतमा मुद्दा दायर गरे। होटलले आफ्नो नाममा भएको क्यासनोको लाइसेन्स खारेज भएकाले तत्काल बन्द गर्न दिएको निर्देशन बिरुद्ध उनले अदालतको अन्तरिम आदेश ल्याएर आए।
अदालतले कम्पनीसँग भएको सम्झौता अवधिसम्म निर्वाध क्यासिनो चल्न दिनु भन्ने आदेश उनले ल्याएका थिए।
उनको आदेशपछि सरकारले लाइसेन्स २०७१ सालमै लाइसेन्स खारेज भएपनि निर्वाध चल्यो।
आदेश ल्याएपनि उक्त क्यासिनोले न त रोयल्टी नै बुझाएको थियो न कुनै सरकारी नियमअनुसार कर नै तिरेको थियो। तर व्यवस्थापनमा भने उतारचढाव आइरह्यो। अदालतको आदेश ल्याउने सुरेन्द्रबहादुर सिंहले पनि क्यासिनो छाडे। उनीबाट भारतीय नागरिक आशिष पटेलले किनेका थिए। उनले किने पनि गेष्ट भने जयन्ती थापाको नाममा गरे। थापा क्यासिनोकै कर्मचारी पनि थिइन्।
पछि आशिष पटेल पनि बाहिरिए अन्तत: क्यासिनो थापकै भयो। उनले अनिश शर्माको माध्यमबाट चलाउँदै आएकी थिइन्।
माघ २० मा काटिएको उक्त पत्रमा होटलले गेष्ट इन्भेष्टमेन्टलाई होटललाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने भाडा, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी सबै बुझाएर ठाउँ खाली गर्न भनिएको छ। तर होटलले त्यस्तो पत्र दिएपनि व्यवस्थापन भने सम्पर्क बाहिर रहेको मजदुरहरुले आरोप लगाएका छन्।
यही कारण मजदुरले क्यासिनो छोड्न मानेका छैनन्। मजदुरहरुलाई आजदेखि अगाडीको गेटबाट भित्र पस्न दिइएको छैन। होटलले सुरक्षा गार्ड ल्याएर राखेको छ भने दिउसो प्रहरी पनि परिचालन गरिएको थियो।
'हामीले आजसम्म काम गरे बापतको पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज, अवकासमा जाँदा पाउनुपर्ने सुविधाको कसले हेरिदिन्छ? क्यासिनो होटलसँग सम्झौता गरेर चलाउने हो सम्झौता सकिएपछि छाड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ तर हाम्रो आजसम्मको सञ्चय कोष के हुन्छ? यसको ग्यारेन्टी नभइ कसरी छाड्ने' अखिल नेपाल होटल तथा रेष्टुराँ मजदुर संगठनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा क्यासिनो रोयलका मजदुर संघ अध्यक्ष अर्जुन खनालले भने।
गएको केहीदिनदेखि व्यवस्थापनका मान्छेहरु सम्पर्क बिहिन भएको उनले बताए।
अहिलसम्म काम गरेको सेवा सुविधा पाएपछि आफूहरुलाई बिदा गरेपनि जान तयार रहेको उनको भनाइ छ। तर पनि यसमा कसैले चासो नदिएको उनले बताए।
व्यवस्थापन सम्पर्क बिहिन एकातिर हुने र अर्कोतिर सम्झौता सकिएपछि होटलले ठाउँ खाली गर्न प्रयत्न गरेपनि आफूहरुले नै क्यासिनो चलाइरहेको उनले जानकारी दिए।
मजदुरहरुले गएको ७५ महिनादेखि आफूहरुले सञ्चयकोष जम्मा हुन छाडेकाले १५/२० करोड पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। क्यासिनोमा ६ सय मजदुर कार्यरत छन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २३, २०७६, ०७:३८:००